တရုတ်အဝယ် မရှိဘဲ ရန်ကုန်ဈေးကွက်သာရှိ၍ အိတ်စ်ပို့ ၂၅ မတ်ဆန် ဈေးထိုးဆင်း စပါးဈေးပါ ဆက်စပ?? - Yangon Media Group
”ခုဆန်ဈေးက ဆက်တိုက်ကိုကျနေတာ။ ဆန်ကတရုတ်ကိုမသွားရင် ရန်ကုန်ဈေးကွက်တစ်ခုပဲရှိတယ်။ ဘာကြောင့် တရုတ်ကမဝယ် တာလဲဆိုတာတော့မသိဘူး။ Export ဝယ်တဲ့သူကလည်း တစ်ဦးနှစ်ဦးပဲ ရှိတယ်ဆိုတော့ ဝယ်သူ့အကြိုက်ဈေးဖြစ်နေတာပေါ့လေ။ ရောင်းတဲ့သူကများပြီး ဝယ်သူနည်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ယခုအခါ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အရှေ့ခြမ်း၊ အနောက်ခြမ်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်အချို့မှ ပြည်ပပို့ဆန် (ဆန်ကြမ်း) အမျိုးအစားစပါးများ စတင်ထွက်နေပြီဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလလယ်တွင် နယ်စုံမှ စပါးများပေါ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ နယ်စုံမှစပါးများမထွက်ပေါ်သေးသည့်ကာလတွင်ပင် စပါးဈေးမှာ ကျပ်ခြောက်သိန်းကျော်မှ ကျပ် ငါးသိန်းဝန်းကျင်ခန့်သို့ ဈေးကျ နေကာ နယ်စုံမှစပါးများထွက်လာပါက နိုင်ငံတော်က သတ်မှတ်ထား သော စပါးကြမ်းခင်းပေါက်ဈေး ကျပ်ငါးသိန်းအောက်သို့ကျသွားနိုင်ပြီး ဆန်နှင့်စပါးဆက်စပ်နေခြင်းကြောင့် အိတ်စ်ပို့ဆန်ဈေးများ ဆက်တိုက်ကျဆင်းနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ”အေးသုခ” ဆန်ပွဲရုံပိုင်ရှင် ဦးအေးလွင်က ပြောသည်။
”တရုတ်က မြန်မာ့ဆန်ကိုမဝယ်ဘဲ အိန္ဒိယက ဆန်ကိုဝယ်နေ တယ်လို့တော့ကြားတာပဲ။ ခုကမ္ဘာ့ဆန်ဈေးလည်းကျနေတယ်။ နယ်စုံ စပါးကလည်း မပေါ်သေးဘူး။ တကယ်လို့နယ်စုံက စပါးတွေပေါ် လာရင် ထပ်ကျမယ့်အလားအလာလို့ပြောလို့ရတယ်”ဟု ¤င်းက ပြောသည်။
ဆယ်အိမ်မှူး အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသူအား ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ပယ်ချခဲ့သည့်ကိစ္စ ရွာသား ၇??